Ciidamada dowladda Soomaaliya oo gudaha u galay deegaanka Masaajid Cali Guduud ee Sh. Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ka tirsan degmada Cadale.
Masaajid Cali Guduud waxaa deganaa Alshabaab, oo halkaas uu u yaallay kontorool ay gaadiidka uga qaadaan dhaqaale badan, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan milateriga Soomaaliya.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ay Ciidamadu ku qaadeen deegaankaas oo Al-Shabaab saldhig u aheyd.
Wararka ka imaanaya deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada halkaas galay ay dib ugu laabteen degmada Cadale, kadib markii ay halkaas ka qaateen lacago badan oo Alshabaab ka uruuriyeen gaadiid mara wadada.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa socda AMISOM, gaar ahaan Burundi ayaa horay gacanta ugu hayey laga bilaabo Muqdisho ilaa degmada Cadale dhanka xeebta, halka ay dhanka howdka ka joogeen ilaa degmada Raage Ceelle.